Kuwedzera font nyowani kune yako ecommerce saiti kunogona kugadzira kutsva uye kwakasarudzika kutaridzika. Heino runyorwa rwemafonti akaburitswa mugore rapfuura. Dzese dzakasununguka kushandiswa kwekutengeserana, asi akati wandei anobva kumakuru emhuri font mhuri. Usati washandisa font, ita shuwa kuti uone mazwi ayo.
Nano ndeye ramangwana rezasi font. The ultramodern, dhizaini dhizaini inopa maitiro, anobatsira pakushambadzira uye marogo.
Nhema fonti yekuratidzira, yakagadzirirwa pasikweya geometric grid kuti igadzire kwakasiyana nemavara ese. Nera rinorema rinowanikwa mahara.
Dirga ndeye yemazuva ano, yekuwedzera ushingi font ine yekumusoro uye yakadzika casings. Dhizaini yayo angular ndeyemberi uye inokanda kumashure kune ekutanga mafonti emakomputa. Dirga inoburitsa tekinoroji nekutamba.
pendi iyo yose-cap brashi font inokodzera kuratidzwa uye logos.
Jenriv Titling ndeye yakasarudzika serif font. Iyi ndiyo yega-cap titling vhezheni, inowanikwa muchiedza, yakajairwa, yakashinga, uye italics.
Bogart iri yepasi-musiyano font, yakafuridzirwa nemafuta-akatarisana dhizaini ema1920s akawana pop tsika chinzvimbo mune hippie yekudhinda ma1960 nema1970. Chiedza Italic uye Semi Bold mafonti mahara.
Halaney iri gobvu script fonti ine hunyanzvi ichiri kuverenga.
Malik iri flared isina serif typeface iyo inovhara mavara echinyakare nemaasipo types maficha, zvichikonzera kugoneka uye kugadzirwa dhizaini. Malik Bhuku ndiyo yemahara vhezheni.
Palo ine fluid fluid dhizaini pasina kunyanyisa. Palo Yakadzvanywa Pakati uye Palo Wide Chiedza mahara.
Hagrid yakagadzirirwa edhisheni uye kuratidza kushandiswa, ine kupesana kwakanyanyisa uye yakasarudzika ruzivo. Hagrid ane zviyero zvitanhatu kubva pa monolinear uye zvetsika mutete kusvika kune inorema inorema. Zviyero zvemahara zvakajairwa, Italic, Chinyorwa Chaicho, uye Chinyorwa Italic.
Inobaya chinhu chazvino chinotyisa typeface ine hunhu - kubva kune yekunyora-dhizaini yematete matete kusvika kumifananidzo yakavezwa yeshanduro dzinorema. Zviyero zvemahara ndeIitalic, Bold Italic, Fit Chiedza, uye Wide Mutete.
Fiorina iri yemazuva ano serif font mhuri. Iyo typeface inouya mune gumi nematanhatu masitayera uye mana masimbi, ichipa hwakawanda mukana wekuchinja. Chinyorwa Chiedza uye Chinyorwa Chiedza Italic mahara.
Iyo Antara Kure
Iyo Antara Kure ndeimwe font font. Iyo yakaonda uye inoyevedza, ine chiyero chakayerwa.
Gogh iri geometric isina serif ine kutaridzika kwazvino. Iyo inosangana zvakaenzana pasina kukanganisa muverengi, zvakadaro ichiri kuchengeta yakapfuma uye yakasarudzika hunhu. Gogh Yakawedzera Bold uye Gogh Yakawedzera Bold Italics mahara.
Garbata inotora mafupa ayo kubva kune echinyakare maficha typeface, ichichengeta iyo quirky yakatsvedza maumbirwo emamwe mavara uye ichiwedzera yakapfava brashi calligraphic.
Gontserrat yakachena uye yakavakirwa isina serif font ine 18 uremu, inokodzera misoro uye branding.
Mondia ndeye yemazuva ano serif font mhuri, yakafuridzirwa neinoshanduka uye yazvino typeface. Mondia ine yepamusoro-musiyano wehunhu hweyakanaka manzwiro. Iwo Akatetepa uye Akatetepa Italic mafonti emahara.
Skaters iri nyore uye chunky yemazuva ano yekuratidzira font - yemalogo, misoro, kushambadzira, uye dhizaini dhizaini.
Amagro iyo yakasarudzika serif font. Yakagadzirirwa misoro yemapepanhau, inobatsira mataira, logotype, uye kushambadzira.
Vendura iri serif inoyevedza ine kubata kwazvino. Akafuridzirwa neepamusoro-musiyano typeface kubva 18th uye 19th century, Vendura inoratidza dhizaini dhizaini inopa hunhu.
Best free Font Manager software ye Windows 10
Aya manomwe Akanakisa mawebhusaiti ekudzivirira Mahara Mahara
Itai kuti Fedora inyore zviri nani
Maitiro ekuisa uye kugadzirisa mafonti pane Windows 10
33 Mahara Pamhepo Dhizaini Maturu Ekugadzira Anoshamisa Ekuona Zvemukati mewebhu
Maitiro Ekuisa Kwemafonti Fonts pane yako iPhone kana iPad
Tronsmart Apollo Bold Ongororo - Inotengeka, Yekutanga TWS Earbuds neQualcomm's TrueWireless Stereo Plus